blog » Orgba alụkwaghịm na ụmụaka
You gbaa alụkwaghịm, ọtụtụ mgbanwe na ezinaụlọ gị. Ọ bụrụ n’inwe ụmụ, mmetụta nke ịgba alụkwaghịm ga-adị nnukwu ha oke. Ọ nwere ike isiri ụmụaka ike karịchaa mgbe ndị mụrụ ha gbara alụkwaghịm. N'okwu niile, ọ dị mkpa na gburugburu ebe obibi ụmụaka kwụsịrị emebi ka enwere ike. Ọ dị mkpa na ọbụna ọrụ iwu ikwekọrịta ụmụaka n'etiti ndụ ezinụlọ mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ gasịrị. Ogo a ga - ejikọ ya na ụmụaka ahụ doro anya dabere na afọ ụmụaka ahụ. Orgba alụkwaghịm bụkwa usoro mmetụta uche maka ụmụaka. Childrenmụaka na-akwụwakarị ma nne na nna ha ike, ha anaghị ekwupụta ihe bụ obi ha mgbe ha gbara alụkwaghịm. N'ihi ya, ha kwesịrị ka e lebara ha anya n'ụzọ pụrụ iche.
Maka ụmụaka, ọ gaghị edocha anya na mbụ ihe ịgba alụkwaghịm pụtara nye ha. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka ụmụaka mara ebe ha guzo na ha nwere ike ịnye echiche ha banyere ọnọdụ ibi ndụ ha mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ gasịrị. N'ezie, ọ bụ ndị nne na nna ga-emecha mee mkpebi.
Iwu ndị nne na nna gbara alụkwaghịm na-abụkarị iwu chọrọ ịzụlite atụmatụ nne na nna. Ọ bụ n'ọnọdụ ọ bụla dịịrị ndị nne na nna lụrụ nwunye ma ọ bụ ndị na-edenye aha ha (na ma ọ bụ na-enweghị ejikọ ha ọnụ) yana maka ndị nne na nna na-ebikọ ọnụ. Atụmatụ nne na nna bụ akwụkwọ nne na nna na-edekọ nkwekọrịta maka iji gosipụta ịbụ nne na nna.
N'ọnọdụ ọ bụla, atụmatụ nne na nna ga-enwerịrị nkwekọrịta gbasara:
otu i siri tinye ụmụaka aka n’ichepụta atụmatụ nne na nna;
otu esi ekewa nlekọta na ọzụzụ (iwu nlekọta) ma ọ bụ otu i si emeso ụmụaka (iwu nnweta);
otu na otu esi enye ibe ya ozi gbasara nwa gị;
otu esi eme mkpebi n’otu isiokwu dị mkpa, dịka nhọrọ ụlọ akwụkwọ;
ọnụ ahịa nlekọta na ịzụlite (nkwado ụmụaka).
Na mgbakwunye, nne na nna nwekwara ike ịhọrọ itinye ọkwa ndị ọzọ na atụmatụ nke nne na nna. Iji maa atụ, ihe gị dịka nne na nna siri ike na nzụlite, ụfọdụ iwu (oge ura, ọrụ ụlọ) ma ọ bụ ile ahụhụ. Nkwekọrịta gbasara ịkpọtụrụ ezinaụlọ abụọ nwekwara ike itinye n’atụmatụ nne na nna.
Iwu nlekọta ma ọ bụ nhazi kọntaktị
Akụkụ nke atụmatụ nne na nna bụ iwu nlekọta ma ọ bụ usoro ịkpọtụrụ. Ndị nne na nna nwere ikike nne na nna nwere ike ikwenye na usoro nlekọta. Iwu ndị a nwere nkwekọrịta gbasara otu nne na nna si ekekọrịta nlekọta na ọrụ ịzụlite. Ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna nwere ikike nne na nna, a na-ekwu ya dị ka usoro ịkpọtụrụ. Nke a pụtara na nne ma ọ bụ nna na-enweghị ikike nne na nna nwere ike ịga n'ihu na-ahụ nwatakịrị ahụ, mana ọ bụghị nne na nna ahụ ka ọ dịịrị nlekọta na nzụlite nke nwa ahụ.
Wingdepụta atụmatụ nne na nna
Na omume, ọ na - abụkarị na nne na nna enweghị ike ịme nkwekọrịta gbasara ụmụaka ọnụ ma dekọọ ha na atụmatụ nne na nna. Ọ bụrụ n ’ịnweghị ike ịmekọrịta nkwekọrịta gị na onye gị na ya bi n’oge gara aga banyere nne na nna mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọ enyemaka ndị ọka iwu anyị ma ọ bụ ndị na-agbasa ozi. Obi ga-adị anyị ụtọ inyere gị aka inye gị ndụmọdụ ma wepụta atụmatụ nne na nna.
Imeghari atụmatụ nne na nna
Ọ bụ omenala na ọ dị mkpa ka emezie atụmatụ nne na nna ka ọtụtụ afọ gachara. E kwuwerị, ụmụaka na-etolite mgbe niile na ọnọdụ metụtara ha nwere ike ịgbanwe. Chee banyere ọmụmaatụ otu n'ime nne na nna ya enweghị ọrụ, kwaga n'ụlọ, wdg. Ọ nwere ike bụrụ ihe amamihe ikwere tupu oge ahụ na a ga-enyocha atụmatụ nne na nna, dịka ọmụmaatụ, afọ abụọ ọ bụla ma gbanwee ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
You nwere umu nke gi na onye gi na ya na alukuru? Nke a bụ ọrụ gị iji lekọta ụmụ gị. Ọ baghị uru ma ị lụọla di ma ọ bụ na ịnọnyere naanị onye gị na ya biburu. Ndi nne na nna nwere oru nke ilebara umu aka ya anya. Ọ bụrụ na ụmụaka bi na onye gị na ya bi mgbe ahụ, ị ​​ga-eso na-enyere aka lekọta ụmụaka. I nwere ọrụ mmezi. Ọrụ nke ịkwado ụmụaka ka akpọrọ nkwado ụmụaka. Ilekọta ụmụaka ruo mgbe ụmụaka ahụ gbara afọ iri abụọ na otu.
Obere nke nkwado nwa
Opekempe nke nkwado ụmụaka bụ euro 25 kwa nwa kwa ọnwa. Enwere ike itinye ego a ma ọ bụrụ na onye ji ya ụgwọ nwere obere ego.
Oke ego maka nkwado ụmụaka
Enweghị ego kacha akwado ụmụaka. Nke a dabere n'ego nne na nna ya na nke nwa ya. Na alimoni ga-adi elu karie ihe a.
Ndezi nlezianya nke umuaka
Onu ogugu nke aka nke umu aka na adi elu kwa afo. Onye Minista ikpe na-ekpebi afọ ọ bụla ihe pasent nwatakịrị na-agbadata. Na omume, a na-akpọ nke a ntụpọ nke alimoni. Nchoputa di nkpa. Onye na-akwụ alimoni ga-etinye ndepụta ntụaka a kwa afọ na Jenụwarị. Ọ bụrụ na emeghị nke a, nne na nna nwere ike ịrụ ọrụ nwere ike ikwu ihe dị iche. You bụ nne ma ọ bụ nna na-anata ego alim ma ọ bụrụ na onye gị na ya na-akpakọrịta ga-ajụ ịkọwa ego ahụ? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu iwu ezinụlọ nwere ahụmịhe. Ha nwere ike inyere gị aka ịchọrọ ịkọwa usoro ndebiri ọzọ. Enwere ike ịme nke a ruo afọ ise gara aga.
Ọ bụrụ na ị bụghị nne ma ọ bụ nna na-elekọta, mana nwee nhazi nleta nke pụtara na ụmụ gị nọnyeere gị mgbe niile, ị ga - eto eto maka nlekọta nlekọta ahụ. A ga-ewepu ego a site na nkwado nwatakịrị. Ọnụ ego nke ego a dabere na nhazi nleta ma dịkwa n'etiti pasent 15 na 35. Ọ bụrụ na gị na nwa gị na-enwekwu mmekọrịta, belata obere ego alimoni ka ị ga-akwụ. Nke a bụ n'ihi na ị ga-ebute ego ka ukwuu ma ọ bụrụ na ụmụaka na-anọnyere gị karịa oge.
Overmụaka karịrị 18
Idozi ụmụaka ga na-elekọta ruo mgbe ha ruru afọ iri abụọ na otu. N ’afọ 21 nwa nwatakịrị dị obere. Site n’oge ahụ gaa n’ihu, ị nweghịzi ihe ọ bụla jikọrọ gị na onye bụbu di gị ma ọ bụ nwunye gbasara ilekọta ụmụaka. Agbanyeghị, ọ bụrụ nwa gị dị afọ iri na asatọ ma ọ kwụsịchaa ụlọ akwụkwọ, ọ bụ ya mere ọ ga-eji kwụsị nkwado nwata. Ọ bụrụ n’agaghị ụlọ akwụkwọ, ọ nwere ike ịga rụọ ọrụ oge niile ma zụọ onwe ya.
Na iwu, nkwekọrịta ndị enyere aka na nlekọta ụmụaka na-aga n'ihu itinye ruo mgbe ụmụaka ha gbara afọ iri abụọ na otu. Ọ bụrụ na ihe agbanwee n’oge na-emetụta ike ịkwụ ụgwọ gị, enwere ike idozi nkwado ụmụaka ahụ otu aka ahụ. Can nwere ike iche maka ịhapụ ọrụ gị, inweta ego karịa, ihe kọntaktị dị iche ma ọ bụ ịlụ di ọzọ. Ihe ndị a bụ ihe mere ị ga-eji lelee alimoni. Ndị ọka iwu anyị nwere ahụike nwere ike ịnwe nnakọta ọzọ n'ọnọdụ ndị ahụ. Ngwọta ọzọ bụ ịkpọ onye ogbugbo ka ọ bịa nkwekọrịta ọhụụ. Ndị ọrụ mgbasa ozi nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka na nke a.
Nkwado nne na nna
Usuallymụaka na-agakarị na nne na nna ha alụkwaghịm. Mana ọ nwekwara ike ịdị iche. Ọ bụrụ na nne na nna họọrọ imekọrịta ihe, ụmụ ahụ ga-ebikọ na nke nne na nna ha. -Zụkọ nwa bụ mgbe nne na nna kesara ma dokwaa ọrụ nlekọta na ịzụlite mgbe a gbasịrị alụkwaghịm. Thenmụaka ahụ birizi ndụ na nna ha na nne ha.
Ezigbo ndụmọdụ dị mkpa
Ndị nne na nna na-atụle ụzọ nne na nna na-emekọ ihe ọnụ kwesịrị iburu n’uche na ha kwesịrị ịna-agwa ibe ha okwu mgbe niile. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ha nwee ike gakwarịta onwe ha ọbụlagodi mgbe ha gbasịrị alụkwaghịm, ka mkparịta ụka wee nwee ike ịga nke ọma.
Spendm spendntak spendr spend na onen about nne na nna ka ha na ha naeme ka nne na nna nye ha. Nke a na-atọkarị ụmụaka ụtọ. Site n'ụdị a nne na nna, nne na nna na-enweta ọtụtụ ihe na ndụ nwata kwa ụbọchị. Nke ahụ bụkwa nnukwu uru.
Tupu ndị nne na nna enwee ike ịmalite ịrụkọ ọrụ ọnụ, ha kwesịrị ikwere n'ọtụtụ ihe bara uru na ego. Enwere ike itinye nkwekọrịta banyere atụmatụ ndị a na atụmatụ nne na nna.
Nkesa anaghị elekọta 50/50
Na omume, ịzụlite nwa na-abụkarị obere nkesa nlekọta. Iji maa atụ, ụmụaka na nne na nna ọzọ nọ ụbọchị atọ. Achọpụtaghị ya na nkesa nlekọta bụ ihe dị ka 50/50. Ọ dị mkpa ka ndị nne na nna leba anya n’ezie. Nke a putara na a ga-ahurita nkewa 30/70 dika ntinye aka na nne na nna.
Ejighi iwu usoro njikọta azụ a. Na iwu, ndị nne na nna na-eme nkwekọrịta nke ha gbasara ụgwọ ha ga-ekeriri na nke ha na-agaghị. Enwere ike ịme ọdịiche n'etiti nke na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ na-ekerịta. Onwe-akwụ ụgwọ akọwapụtara dị ka ego ụlọ ọ bụla na-ewetara onwe ya. Ihe atụ bụ mgbazinye, ekwentị na ahịa. Ego ị ga-ekerịta nwere ike ịgụnye ọnụ akwụ ụgwọ nke otu nne na-akwụchitere ụmụaka. Iji maa atụ: mkpuchi, ndenye aha, onyinye ma ọ bụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ.
Core nne na nna na alimoni
A na-echekarị na onweghị ego a ga-akwụ n ’ebe nne na nna zikọtara. Echiche a ezighi ezi. Na imekọ ihe ọnụ, nne na nna nwere ihe gbasara otu akwụ ụgwọ maka ụmụaka. Ọ bụrụ na nne na nna nwere ego dị elu karịa nke ọzọ, ha nwere ike iburu ego ụmụaka ngwa ngwa. A ga - eleba anya na onye nwere nnukwu ego ga - akwụ ego nne na nna ọzọ. Maka ebumnuche a, enwere ike ịme ngụkọta ego site na otu n'ime ndị ọka iwu iwu ezinụlọ nwere ahụike. Ndị nne na nna nwekwara ike ikwenye na nke a. Ohere ọzọ bụ imepe akaụntụ ụmụaka. Na akaụntụ a, ndị nne na nna nwere ike inye ego mgbazinye ego kwa ọnwa yana ọmụmaatụ, nwa ahụ nwetara ya. Emecha, enwere ike ịme ego maka ụmụaka nke akụkọ a.
Previous Post Orgba alụkwaghịm site na nghọtahie
Next Post Nbipụta na ikike ihe osise